Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena - Sakafo Nutri | Nutri Diet (Pejy 2)
Fa maninona no miseho ny fikorontanan'ny hozatra?
Mianara mamantatra ny toetranao ara-batana ara-potoana hisorohana ny fikorontanan'ny hozatra, mety hahasosotra sy maharary tokoa izy ireo.
Fanentanana isan-karazany hanoratanao haingana ny sandrinao
Izahay dia manolotra andiana fanerena isan-karazany izay, fanazaran-tena tsy tapaka, dia hanampy anao hamolavola haingana kokoa ny sandrinao.
Ahoana no hijanonana ho salama nefa tsy manao fanatanjahan-tena
Azavainay izay tokony hataonao mba hahasalama anao hatrany nefa tsy hanao fanatanjahan-tena mety. Fahazarana tsara efatra ho an'ny vatana sy saina.
Ireto toro-hevitra ireto dia hanampy anao hihataka bebe kokoa amin'ny fiofanana amin'ny herinao, izay midika vokatra haingana sy tsara kokoa.
Ahoana ny fomba hanombohana milomano ho fanatanjahan-tena
Te-hanomboka hampiasa milomano ho fampiofanana ve ianao? Araho ireto torohevitra ireto amin'ny zavatra toy ny fitaovana, ny faharetany ary ny matetika.
Mila manao fanatanjahan-tena aerobika ve ianao mba hihena?
Mba hampihenana ny lanja dia ilaina ny manao fanatanjahan-tena aerobika mba hahavery lanja. Tsotra izany ary hahatonga antsika hahatsapa ho tsara, hampiditra ny fampihetseham-batana amin'ny fanazaran-tena isan'andro
Fihenjanana eo amin'ny soroka sy ny hatoka? Andramo ireto fanazaran-tena telo ireto
Raha manana fihenjanana amin'ny soroka sy tendanao ianao, andramo ireto telo manitatra ireto, izay tena mandaitra hampihenana ireo faritra roa ireo.
Fetsy mba ho mazoto kokoa amin'ny gym
Na eo aza ny tsy fahitan'ny olona maro azy, ny fanentanana bebe kokoa amin'ny gym dia iray amin'ireo ...
Paikady tsy mety lavalava mba hanitarana ny fiofanana
Ny fanitarana fampihetseham-batana no tsiambaratelo hahatongavana amin'ny tanjonao. Eto izahay dia manazava ny paikady hahatratrarana azy nefa tsy mila reraka.
Fampiofanana matanjaka - Impiry isan-kerinandro?
Raha manontany tena ianao hoe isaky ny impiry ianao no mila manao fiofanana matanjaka mba hahazoana vatana milamina kokoa, ity ny valiny.
Zavatra miteraka fihenan'ny lanja
Raha efa niatrika fihenan-danja ianao, dia fantaro raha misy amin'ireto fahazarana ireto no tompon'andraikitra ary miverina amin'ny lala-mahitsy.
Fanafody manohitra ny lokon'ny tarehy rehefa mampihatra fanatanjahan-tena
Azavainay ny fomba hialana amin'ny fika tsotra, ny lokon'ny tarehy mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena, izay ahitan'ny olona maro tsy mahazo aina.
Ahoana ny fomba hahomby kokoa amin'ny dianao
Andramo ireto fikafika ireto raha tianao ny manampy anao handresy ny hozatrao amin'ny fomba mandaitra kokoa noho ny teo aloha ny dianao.
Fa maninona no sarotra be ny fampiofanana ataoko maraina?
Jereo hoe maninona ny vatanao no mandà tsy tapaka ny fanazaran-tena malaza amin'ny maraina ary inona avy ireo dingana azo raisina manoloana izany.
Fiofanana haingana tsy misy fitaovana hampiakarana ny glute
Azavainay ny fomba, raha tsy miovaova ianao dia afaka manainga ny fitombenanao amin'ny fanokanana dimy minitra isan'andro fotsiny ary tsy mila fitaovana.
Toe-javatra efatra ahafahanao miala sasatra nefa tsy mahatsiaro tena ho meloka
Ireto misy toe-javatra efatra ilana fitsaharana amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena tena ilaina ary tsy tokony hahatonga anao hahatsiaro tena ho meloka.
Ahoana ny fandokoana ny abs amin'ny ivelan'ny gym
Ireo fahazarana telo ireo dia hanampy anao handoko ny abs ao ivelan'ny gym. Ary ny fahazoana fotokevitra matanjaka kokoa dia asa 24 ora.
Raha tsy hahatonga anao hihena ny fihazakazahana dia andramo ity
Raha tsy mampihena ny lanjanao ny fihazakazahana dia mety noho ny iray amin'ireo zavatra ireo. Azavainay ny antony mahazatra indrindra sy ny vahaolana.
Antony 6 izay mahatonga ny fanaovana fanatanjahan-tena mendrika
Ny fampiharana ny valim-panatanjahan-tena dia manome valisoa isaky ny segondra. Eto izahay dia manazava ny antony amin'ny alàlan'ny teboka enina mifantoka amin'ny tombontsoa samihafa.
Ny fampihetseham-po kardia tsara indrindra ho an'ny glute
Raha te hahatratra fiovana lehibe amin'ny fisehoan'ny glute ianao dia andramo ireo fampihetseham-po ho an'ny kardia, ny tsara indrindra ho an'ny volo.
Torohevitra momba ny fihazakazahana any ivelany amin'ny ririnina
Manolotra anao izahay torohevitra mba hahafahanao mihazakazaka any ivelany amin'ny ririnina soa aman-tsara. Ary ny fialan-tsasatra dia tsy fialan-tsiny, fa mila fitandremana.
4 fampihetseham-batana tsy mahomby XNUMX mahomby
Raha tsy anjaranao ny mihazakazaka dia ireto misy fiofanana efatra hafa mahomby amin'ny fandoroana tavy sy fihenan'ny lanja.
Fiovana 5 hanovana ny vatanao amin'ny 2017
Moa ve ny fanatsarana ny fisehoanao ho anisan'ny fanapahan-kevitrao amin'ny Taom-baovao? Araho ireto torohevitra ireto amin'ny fampiofanana. Fiovana izy ireo hanovana ny vatanao.
Ahoana ny fomba hamoronana toerana fisaintsainanao manokana ao an-trano
Ireto toro-hevitra ireto dia hanampy anao hamorona toerana fisaintsainana tsara ao an-trano mba hanamaivanana ny adin-tsaina, ny tebiteby ary ny olana hafa izay manakana anao tsy ho sambatra.
Ny tombony azo amin'ny ady totohondry, ny fanatanjahantena ankafizin'ny vehivavy vaovao
Niharan'ny tafio-drivotra ny vehivavy tamin'ity taona ity. Eto no amariparantsika hoe inona ireo tombony nahatonga azy io ho fanatanjahantena ankafizin'ny vaovao.
Fomba ahazoana tombony betsaka amin'ny fampiofanana amin'ny lanjan'ny vatana
Manolotra anao izahay torohevitra hanatsarana ny valin'ny fiofanana ho lanja amin'ny vatana, fomba iray izay mitaky lanja ny vatanao ihany.
Deadlift hanamafisana ireo glute
Ny deadlift dia fanatanjahan-tena tsotra sy mahomby tokoa amin'ny fampiakarana ny vody. Atorinay anao ny fomba fampiharana azy tsikelikely.
Torohevitra fampiofanana indroa isan'andro
Ny fampiofanana indroa isan'andro dia hanampy anao hahatratra ny tanjon'ny lanjanao haingana, saingy misy zavatra maromaro tokony ho fantatrao alohan'ny hanombohanao.
Fetsy izay manamora ny fanofanana maraina
Manolotra torohevitra izahay, mifandraika amin'ny fiomanana, izay manamora ny fanazaran-tena amin'ny maraina ary manampy anao hahatratra fahazarana mahazatra.
Yoga 3 no miarina amin'ny fanatanjahan-tena
Ireto posy yoga telo ireto dia hanampy anao amin'ny laoniny amin'ny fampihetseham-batana, hampitombo ny fahalalahanao ary hamoaka fihenjanana mihombo.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fihinanana proteinina aorian'ny fiofanana maraina
Aza mihinana proteinina aorian'ny fampihetseham-panao maraina? Eto izahay dia manazava ny antony tokony hanombohanao manao azy.
Torohevitra hiatrehana ny kilasinao yoga voalohany
Handeha kilasy yoga voalohany ianao? Ny fampiharana ireo torohevitra telo ireo mandritra ny herinandro vao manomboka dia hanampy anao hifanaraka tsara.
Angano diso telo momba ny vehivavy sy ny fampiakarana lanja
Ny fifandraisana misy eo amin'ny vehivavy sy ny fampiakarana lanja dia miorina amin'ny angano sandoka maromaro izay foanantsika eto.
Ity hetsiky ny sandry ity dia hanampy amin'ny fanalefahana ny fihenjanan'ny andro
Izahay dia manazava tsipika kely misy tarika elastika izay hanampy anao hanala ny fihenjanana amin'ny andro sy hahazo tanjaka, ary hisorohana ny ratra.
Ahoana ny fomba fanaovana fiainana an-tongotra
Manolotra anao ny fanalahidy hifehezana ny fanatanjahantena mitsangatsangana. Fanatanjahan-tena misy fiatraikany ambany izay manatsara ny toe-po sy mampihena ny mety ho aretina.
Sakafo salama telo tsy tokony hohaninao alohan'ny fampiofanana
Ireo sakafo telo ireo dia mety hiteraka olana raha mihinana alohan'ny fiofanana. Fantaro hoe iza izy ireo ary nahoana izy ireo no tsy mety.
Hatraiza ny fanatanjahan-tena ilainao hahasalama anao?
Azavainay izay lazain'ny dokotera rehefa miresaka momba ny fanatanjahan-tena matetika izy ireo, izay tena ilaina mba hampihenana ny aretina atahorana.
Nahoana no zava-dehibe tokoa ny andro fitsaharana?
Rehefa henjana dia tokony ampifamadiho amin'ny andro fitsaharana ny fampihetseham-batana. Ireo no voka-dratsy ara-batana sy ara-tsaina vokatry ny fampiofanana be loatra.
Azo antoka ve ny mihazakazaka amin'ny maripana ambony?
Ny fihazakazahana amin'ny hafanana mafana dia mety hisy vokany ratsy eo amin'ny fahasalamana. Eto izahay no manazava ny zavatra tokony ho tadiavinao raha azo antoka izany.
Torohevitra 4 hahazoana tombony betsaka amin'ny bisikileta fanazaran-tena ataonao
Raha vaovao amin'ny bisikileta mijanona ianao, ireto torohevitra manaraka ireto dia hanampy anao hampiasa betsaka kokoa azy io handrenesana sy handoroana kaloria haingana kokoa.
Nahoana no zava-dehibe ny miaina amin'ny diaphragma?
Mbola tsy fantatra ve ny maha-zava-dehibe ny fifohana rivotra avy amin'ny diaphragm? Eto izahay dia manazava ny tombony sy ny fomba hifehezana ilay antsoina hoe miaina diaphragmatic.
Dingana 4 hanamboarana ny tongotra aorian'ny fihazakazahana
Araho ireto dingana tsotra 4 ireto hanamboarana ny tongotrao aorian'ny fihazakazahana na fanatanjahan-tena hafa izay miteraka fihoaram-pefy amin'ity faritra amin'ny vatana ity.
Torohevitra 4 handehanana bebe kokoa sy hampihena ny lanja
Ny fandehanana bebe kokoa dia mitarika zava-bita lehibe mifandraika amin'ny fahasalamana sy ny silhouette. Eto izahay dia manome tetika anao hahafahanao mampiditra fihetsiketsehana bebe kokoa isan'andro isan'andro.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fiofanana amoron-dranomasina
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao momba ny fiofanana eny amoron-dranomasina mba hahafahanao mahazo endrika amin'ny fahavaratra izao mandritra ny fialantsasatra am-pilaminana.
Fandroana sy fanatanjahan-tena, ny fikarakarana tokony horaisina
Ny sasany sasaky be, ny sasany tena kely. Antony samihafa no tafiditra sy mamaritra ny valiny ara-batana, ka ...
Ahoana ny fandoroana kaloria bebe kokoa amin'ny cardio
Raha te handoro kaloria bebe kokoa amin'ny kardio ianao dia raiso ireo hevitra telo ireo rehefa hanampy anao hahatratra azy ny fiofanana.
Araho ity drafitra ity hanamafisana ny tongotrao amin'ity lohataona ity
Ny fanarahana an'io drafitra io dia hanampy anao hanonona haingana ny tongotrao amin'ny fomba mahomby mba hampisehoana vatana ambany azo tsapain-tanana amin'ny karazana akanjo rehetra.
Ny squat hanamafisana ny hozatry ny rantsany ambany
Ny squat dia hetsika fanatanjahan-tena izay manakana ny hozatry ny gluteal tsy hiala sasatra. Ampiharina ihany koa ...
Tombony 4 amin'ny fanatanjahan-tena tsy misy ifandraisany amin'ny lanjany
Fahadisoana ny fanatonana ny fanatanjahantena ho fomba tsotra handoavana kilao. Ireto misy tombony 4 amin'ny fanatanjahan-tena tsy misy ifandraisany amin'ny lanjany.
Zavatra 5 tokony hataon'ny tsirairay aorian'ny fiofanana
Ireto ny zavatra 5 tokony hataon'ny tsirairay aorian'ny fampiofanana mba hahatsapa ho tsara sy hisorohana ny fanaintainana sy ny ratra.
Azo atao ve ny mampiofana rehefa manana henjana ianao?
Tokony hampiofana ve isika na eo aza ny hamafiny sa tokony hatao ny fialan-tsasatra iray andro? Eto izahay dia manazava ny fomba hiatrehana kiraro kiraro.
Torohevitra 4 handoroana kaloria bebe kokoa amin'ny trainer cross elliptical
Te handoro kaloria bebe kokoa amin'ny mpampiofana elliptical ve ianao? Manasa anao izahay hampihatra ireo torohevitra ireo mandritra ny fiofanana ataonao.
Fanatanjahan-tena aerôbika hampihena ny lanjany
Ny fanazaran-tena aerôbika dia mety ho fitaovana iray hampihena ny lanjany, indrindra ao anatin'ny regimen. Izy ireo dia mety amin'ny fandoroana ny ...
Torohevitra vitsivitsy hankafizana ny soa azo avy amin'ny mandeha an-tongotra
Ny fandehanana mihetsika dia tsara ho an'ny fahasalamanao ary tsara mba hitazomana ny fahasalamana. Azo antoka fa momba ...
Fiofanana hanohy ny fihazakazahana aorian'ny ririnina
Ampiharo ity fampihetseham-batana ity raha mikasa ny hiverina hihazakazaka ianao aorian'ny fiatoana mandritra ny volana maromaro mba hanomezana vahana ny vatanao hanitsy.
Torohevitra mahomby sasany hamoizana ny abs tsy hampihatra ny kibo
Ny fahaverezan'ny kibo dia tsy misy tsara kokoa noho ny fanazaran-tena sy ny hetsika ampifanarahana. Raha te ho very tavy kibo ianao ary ...
Ovao ny fanazaran-tena hampiofanana mba hampitomboana ny faharanitan-tsaina
Ny fanovana ny fanazaran-tena ataonao dia misoroka tsy tapaka ny fijanonana, fa tsara ho an'ny atidoha koa izany. Eto izahay dia milaza aminao ny antony.
Mivelatra alohan'ny sy aorian'ny fampihetseham-batana
Ny zoro dia sokajiana ho sokajy roa midadasika, ny velarana mavitrika ary ny tohika static. Static mamelatra ny ...
Cellulite manasitrana amin'ny tongotrao
Ny cellulite dia miangona ao amin'ny tongotsika saika tsy tsapantsika, hisorohana azy ary hitazomana azy, mifantoka amin'ny sakafo sy fanazaran-tena tsara
Fanatanjahan-tena hanamafisana ny ampahany afovoan'ny vatana amin'ny fahavaratra
Te hanana ny feon'ny afovoan'ny vatana amin'ny fahavaratra ve ianao? Eto izahay dia manazava ny fomba hahatratrarana azy amin'ny fampiharana telo fotsiny.
Torohevitra rehefa mihazakazaka voalohany
Ilaina ny akanjo sy ny kojakoja raha te hampihatra fanatanjahan-tena soa aman-tsara ianao, ...
Ny famenon-tsakafo mety indrindra ho an'ny bodybuilding
Eo amin'ny talantalan'ny fivarotam-panafody sy fivarotana manokana hafa, dia mifampitohy ireo siny misy kojakoja ho an'ny atleta ...
Ny tombony azo amin'ny jogging matetika
Toy ny hetsika misy fiatraikany lehibe, tsy ho an'ny rehetra ny jogging. Misy ny tranga izay ...
Ny fototry ny hafanana, torohevitra mahasoa
Ilaina sy mahomby ny fampifanarahana ny fanafanana ireo seha-bodybuilding. Ny fanamainana dia tsy maintsy mivoatra ho toy ny ...
Ny hetsika tsara indrindra hialana sasatra
Raha mitady hetsika hialana sasatra ianao dia malalaka ny safidy. Ny fotoan-tsarotra iainantsika dia namela ny ...
Fihazakazahana sy karazana mandeha - Fantaro raha toa ianao ka mpandika teny na mpanohana
Raha mpihazakazaka ianao dia afaka manampy amin'ny fisorohana fanaintainana sy ratra ny fahalalana ny karazana dian-tongotra. Jereo eto raha toa ianao ka mpandika teny na mpanohana.
Fahadisoana aorian'ny fampiofanana telo tokony hialanao foana
Ny fanaovana ireo lesoka aorian'ny fampihetseham-batana ireo dia mety hanimba ny ezaka ataonao ary hampitombo ny risikao amin'ny ratrao. Jereo hoe inona no azon'izy ireo atao mba hisorohana azy ireo.
Fanatanjahan-tena inona no tokony hatao raha manana lalan-drà ianao?
Raha manontany ianao hoe inona ny fanatanjahan-tena azonao ampiharina rehefa manana lalan-drà ianao, ny zavatra voalohany tokony ho fantatra dia ny ...
Nahoana indraindray no tsy azo atao ny manafoana ny tavy amin'ny kibo amin'ny fihazakazahana?
Tsy afaka manala ny tavy amin'ny kibo ve ianao amin'ny fihazakazahana? Eto izahay no manazava izay fanovana tsy maintsy ataonao mba hampandeha ny kibo mandeha.
Fomba ahazoana mametaka vodiny voafaritra miaraka amina fanatanjahan-tena tokana
Te hanana vodiny sy feny voafaritra ve ianao? Eto izahay dia manazava fanazaran-tena iray izay hanampy anao hahatratra azy raha mampihatra azy im-betsaka isan-kerinandro ianao.
Inona avy ireo yoga mety tsara amin'ny aretin'andoha?
Mampianatra anao pose yoga telo izahay izay manampy amin'ny fanesorana ny aretin'andoha ateraky ny adin-tsaina sy ny havizanana amin'ny adidy isan'andro.
Torohevitra hampihenana lanja amin'ny gym
Ny zavatra voalohany sy manan-danja indrindra hampihenana lanja amin'ny gym dia ny tsy hahavery ny antony manosika.
Fitness sy fihenam-bidy, hevitra roa mifameno
Ny tena tanjon'ny fihenan-tena dia ny hampihena ny lanjany na farafaharatsiny mba tsy hahazo pounds fanampiny. Ny tavy dia fahavalo voajanahary amin'ny fahasalamana sy fahasalamana. Toy izany koa, zava-dehibe ny fihenan'ny lanja ho an'ny fahasalamana ary ny fahaverezan'ny valahana mahia ho an'ny fahavaratra, ohatra.
Fitandremana rehefa manao fampiharana any ivelany mandritra ny ririnina
Azavainay izay fitandremana tokony horaisina mba hampihetsi-po tsara any ivelany mandritra ny ririnina.
Ny sakafo mety indrindra alohan'ny fampiharana
Manolotra anao ny hevitra fisakafoanana mialoha, izay iombonanao rehetra izay navoakan'ny mpahay sakafo matanjaka.
Zavamaniry efatra izay mampitombo ny hozatra
Tanisao miaraka amin'ireo zavamaniry efatra manana fananana mampiroborobo ny fitomboan'ny haavon'ny hozatra sy ny haavon'ny angovo.
Fanatanjahantena ara-panatanjahantena; tahan'ny gliosida sy proteinina
Ny sakafo dia mamorona karazana fanehoan-kevitra hormonina izay misy fiantraikany amin'ny toe-tsaina, fahamailoana, haavon'ny ...
Aleo rano toy izay zava-pisotro fanatanjahan-tena?
Miankina amin'ny ambaratonga na ny fahasarotan'ny asa ara-batana natao, voafaritra raha tsara kokoa ny misotro rano na zava-pisotro ara-panatanjahantena.
Inona ireo bara proteinina? Ny ankamaroan'ny bara misy proteinina dia lanin'ny tontolo ...
Filankevitra mahasalama; "Aza manao fanatanjahan-tena amin'ny vavony feno"
Tokony hitandrina hatrany ianao amin'ny fiandrasana adiny telo na adiny efatra, handehanana amin'ny sakafo ka hatramin'ny ...